Doorashooyinka gobalka Cameroon: sharciyo cusub. - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » kale Doorashooyinka gobalka Cameroon: sharciyo cusub.
Doorashooyinka gobalka Cameroon: sharciyo cusub.
Maalmahan soo socda, Madaxweynaha Jamhuuriyadu wuxuu ballan-qaaday biilasha xildhibaannada gobolka ka dib markii ay aqbalayaan labada aqal ee Baarlamaanka.
Inta lagu jiro kulan loo dhan yahay shir Madaxweynaha Senate, Marcel niat njifenji on Friday, April 5 2019, guurtida ayaa soo bandhigay sharci qamaar tirada, saami by category iyo gunnooyinka xildhibaannada gobolka iyo kabo qodobada qaarkood sharciga No. 1. 2012 / 1 ka 19 2012 April on code doorashada.
Biilasha waxaa difaacay Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Bulshada, Georges Elanga Obam.
Biilka la xidhiidha lambarka, saamiga qaybta iyo gunnooyinka xildhibaannada gobolka ayaa tilmaamaya, gaar ahaan, waaxdu waa degmada doorashada ee maamulka doorashada xildhibaannada gobolka.
Sharciga ayaa wax ka beddelaya oo ku dallacaya qodobbo ka mid ah 2012 1 19 / 2012 No. XNUMX oo ku saabsan xeerka doorashada ayaa bixinaya faahfaahin ku saabsan doorashooyinka golayaasha degaanka.
Laba biilashaas ayaa lagu soo bandhigay oo ay soo ansixiyeen Golaha Qaranka kadibna waxaa loo gudbiyay Senateatka Guddoomiyaha Golaha Shacabka. Cavaye Yegue Djibril si loo tixgeliyo iyo korsasho suuragal ah.
Dadku waxay ka ilaalin lahaayeen sawir-gacmeedka caruurtiisa kumbuyuutarka in uu wiilkiisa ciyaarayo - xnxx
Qodobka ugu Wanaagsan Dunida ee Shukulaatada Dunida - New York Times